यी बहुचर्चित स्टारहरु, जो गम्भीर रोगबाट पीडित छन्
माघ २८, २०७४ आइतवार २१:१७:२८ प्रकाशित
१. सेलेना गोमेज
पप स्टार सेलेना गोमेज सन् २०१३ मा आफ्नो सांगिटिक टुर एक्कासी स्थगित गरिन् । कारण थियो, उनलाई लागेको रोगप्रतिरोधी क्षमतामा समस्या देखिने रोग ‘लुपस’ । उनी केही समय व्यस्त जीवनबाट विश्राम लिएर उपचार गराउन चाहिन्थिन् । सोहीअनुसार उनी करिब २ वर्ष कतै देखिइनन्। यो कुरा उनले २०१५ मा बिलबोर्ड म्यागाजिनलाई दिएको अन्तर्वार्तामा खुलासा गरिन् ।
लुपस पुरुषमा भन्दा महिलामा बढी देखिन्छ र बच्चाबेलैदेखि लाग्छ । जब लुपस हुन्छ, शरीरले आफ्नै कोषमाथि आक्रमण गर्छ, जसबाट शरीरमा दाग आउने, मुखको अल्सर हुने, मिर्गौलामा समस्या देखिने तथा शरीरका विभिन्न अंगमा जलन हुनेजस्ता समस्या देखिन्छ । लुपस निको पार्न नसकिएपनि उपचार भने छ । निकै गम्भीर अवस्थामा पुगिसकेका बिरामीलाई क्यान्सरका बिरामीलाई दिइने औषधी दिन सकिन्छ ।
सेलेना गोमेजबाहेक यस्तो रोग लेडी गागा, निक क्यानन, टोनी ब्राक्स्टनलाई पनि लागेको छ ।
२. चार्ल्स शिन
अभिनेता चार्ल्स शिन सन् २०१५ मा विश्वभर हेडलाइन बने, जब उनले एनबीसीको शो ‘टुुडे’ मा आफूलाई एचआइभी लागेको खुलासा गरे । उनलाई २०११ देखि नै एचआइभी संक्रमण थियो । एचआइभीले पनि मानिसको प्रतिरोधी क्षमतालाई नष्ट गर्छ । विगतमा यो रोगलाई मृत्युदण्ड नै भनिन्थ्यो, । तर अहिले एन्टी रेट्रोभाइरल थेरापीकोमाध्यमबाट एचआइभीको असरलाई कम गर्छ सकिन्छ र शरीरमा प्रतिरोधी क्षमताको विकास गर्न सकिन्छ । अमेरिकी स्वास्थ्य निकायको तथ्यांकअनुसार अमेरिकाभर १२ लाख मानिस एचआइभी संक्रमित छन्।
३. टम ह्यांक्स
अभिनेता टम हयांक्सले २०१३ मा आफूलाई टाइप टु डाइबिटिज लागेको बताएका थिए । उनले लामो समयदेखि रगतमा सुगरको मात्रा रहेको र त्यो डाइबिटिज भन्न लायक रहेको बताएका थिए । डाइबिटिज हुँदा शरीरले ल्ब्लड सुगरको मात्रा नियन्त्रण गर्न सक्दैन । यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएन भने मुटु रोग निम्त्याउने समस्या पनि हुन्छ । यसले स्नायुमा क्षति, अन्धोपना र मिर्गौलामा समस्या निम्त्याउने सम्भावना पनि हुन्छ ।
४. किम कार्दशियन
मोडल तथा अभिनेत्री किम कार्दशियनलाई पनि सराइसिस नामक छालाको समस्या रहेको बताइन्छ । खुट्टाको छालामा राता दाग देखिएपछि सन् २०११ मा उनलाई यो रोग लागेको थाहा भएको थियो । यो उनको पारिवारिक रोग हो । उनकी आमा क्रिस जेनरलाई पनि यो रोग रहेको बताइन्छ । यो पनि शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा आउने समस्या हो । यसबाट ७५ लाख अमेरिकीहरु पीडित रहेको तथ्यांक छ ।
५.माइकल जे फक्स
टीभी तथा फिल्म स्टार माइकल जे फक्सलाई पार्किन्सन्स रोग लागेको सन् १९९१ मै थाहा भएको थियो, जतिबेला उनी ३१ वर्षका थिए । त्यसको ७ वर्षपछि मात्र उनले आफूलार्इृ रोग लागेको घोषणा गरे । यो स्नायुसम्बन्धी समस्या हो, जसका कारण मानिस हिड्न र शारीरिक क्रियाकलाप गर्न सक्दैनन् । ५० वर्षमाथिका मानिसलाई यो रोग सामान्य मानिन्छ । हरेक वर्ष अमेरिकामा पार्किन्सन्सका ६० हजार नयाँ केस आउछन् ।
६. एलिसावेथ हेसलबेक
एबीसी टेलिभिजनकी को–होस्ट एलिसावेथ हेसलबेकलाई ‘सेलियाक’ रोग छ । यो पाचनप्रणालीसम्बन्धी समस्या हो, जसलेृ खाना पचाउन अवरोध गर्छ । गहुँ र जौंमा पाइने ग्लुटेन बढी भयो भने यो समस्या निम्तन्छ । अमेरिकामा सेलियाक रोगबाट २० लाख मानिसहरु प्रभावित छन् ।
७. मोन्टेल विलियम्स
टीभी प्रस्तोता मोन्टेल विलियम्सले १९९९ मा आफूलाई मल्टिपल स्क्लेरोसिस लागेको सार्वजनिक गरेका थिए । यो मष्तिष्क र स्पाइनल कर्डमा समस्या निम्त्याउने रोग हो । यो रोगबाट ४ लाख अमेरिकी प्रभावित छन् ।
८. ब्रेट माइकल्स
रियालिटी टीभी स्टार तथा प्वाइजन ब्यान्डका लिड गायक ब्रेट माइकल्सलाई सन् २०१० मा मिनी स्ट्रोक भयो । मुटुमा सानो प्वाल पर्दा यो समस्या निम्तन्छ । यसको मुख्य कारण नसामा रगत जम्नु नै रहेको अमेरिकन स्ट्रोक एशोसियसनले जनाएको छ । डाक्टरले उनको मुटुको धमनीमा क्याथेटर राखिदिएका छन् । हरेक वर्ष ७ लाख ९५ हजार अमेरिकीलाई स्ट्रोक हुन्छ ।